Haweenka Puntland oo ka Shiray Arrimaha Dastuurka Somaaliya (dhegayso) – Radio Daljir
Janaayo 22, 2018 12:21 g 0
Caasimadda Puntland ee Garoowe ayaa lagu qabtay kulan looga hadlayey Sidii doorwanaagsan ay haweenku ugu lahaan lahaayeen Dastuurka Somaaliya ,iyado kulanka ay ka qayb galeeen Haween kala duwan iyo Masuuliyin katirsan Puntland.
waxaa soo qaban qaabiyaay Gudoomiyaha hay,ada Tag Foundation oo gacan ka helaysa Hay’ada UNDP.
Marwo Caasho Gelle oo madasha ka hadashay ayaa ku dheeratay muhiimad ay leedahay in dastuurka dalka lagu dari lahaa qodobo ka hadlaya arimaha Haweenka lagu dari lahaa dastuurka dalka.
Marwo Caasho ayaa sheegtay in gobaladda dalka oo dhan lagu qaban doono shiraar looga hadlayo sidii haweenka daasturka dalka qodob iyaga ka hadlaya xaqoodana looga hadlayo lagu dari lahaa dastuurka Somaaliya
Dhinaca kale Marwo Caasho Gelle Diiriye ayaa kamid ahayd dadkii waqtiga ugu badan galiyey arimaha Dastuurka xiligii la qorayey iyagoo ku taliyey xiligan in lagu daro Dastuurka qodobo si gooni ah uga hadlaya Haweenka.
Maryan xuseen oo kasocota hay’ada SWDS oo ah Hay’ad u dooda Arrimaha Haweenka oo goobta ka hadashay sida dastuurka dalka usan ku cadayn xuquuqda dumarka leeyihiin ,iyado sheegtay in tusaale ahaan loo soo qaato ma ahee an ujeedada iyo baahida dumarka aysan ka arkin dastuurka.
Sucaad Saalax Nuur Wasiir ku xigeenka Wasaarada Duulista Hawadda iyo Garoomadda Puntland oo madasha Shirka ka hadlaysay ayaa sheegtay in ay rajaynayaan in dastuurka Somaaliya lagu soo darro qodobo ka hadlaya Xuquuqda Dumarka .
isku soo wadda duubo Gobalada dalka ayaa lagu qaban doona Shiraar la xiriira sidii haweenka somaliyeed lagu dari lahaa Qodob ka hadlaya Xuquuqdooda dastuurka dalka.